Fampihavanana sa Fifamelana? – Malag@sy Miray
Ny rehetra dia miaraka miaiky fa ela loatra ity krizy indray mitoraka ity. Efa-taona mahery izao no nitranga ireny « alatsinainy mainty » sy ny tranga nisy teo Ambohitsorohitra. Tsy iverenana ny tantara fa maro ireo rohy samihafa mitantara izany.
Mila mihavana ny malagasy. Tsy azo lavina izany. Ary tsy mihavana fe mihavana fotsiny fa tena mila mifamela heloka ihany koa. Io tsy vitan’ny resaka « amnistie » na tsy « amnistie » fa avy any am-po lalina tsy tambazana vola na harena na voninahitra. Ahoana marina moa no ahafahana miara-mandroso, hivoaka ny kizo raha toa ka mihavana nefa ny kibay an-kelika ihany? Ao no mety hieritreritra hoe « mody miaraka aloha izao fa asiako io vao tafavoaka eo » SANATRIA anie izany, ho very avokoa ireo ezaka rehetra natao raha toa ka izany.
Taona maromaro lasa izay, toy ny vao omaly, dia naindraindra ny Fihavanana sy Firaisan-kina satria soatoavina mampifamatotra am-po ny samy malagasy. Nanao ny hirany i Jaojoby manao hoe « samy mandeha samy mitady » dia toa nanaraka io hira nalaza io ihany koa ny toe-tsain’ny tsirairay.
Aiza intsony amin’izao ny fahamarinan’ny ohabolana manao hoe « Trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalen-kialofana »? na ihany koa ny hoe « Tanan-kavia sy havanana ka izay didi-maharary »? FA « Asa-vadi-drano » io resaka Fampihavanana io ka « tsy vita raha tsy ifanankohonana ».
Ankehitriny dia re fa mitaky tambin-karama 4 na 5 tapitrisa Ariary ireo mpikambana voafantina. Miandry ny fanamarinan’izany izahay eto am-panoratana, saingy malahelo kosa raha ho fanasoavana ny tanindrazana dia resaka vola sy karama no mahamaika. Marina fa mila tambiny ny asa rehetra atao, marina fa amin’izao voalohany izao dia tsara ny mametraka avy hatrany ny fototra iasàna, fa raha tsiahivina hoe mahery kelin’ny fito alina Ariary ny karama farany ambany izay raisin’ny vahoaka ary eo amin’ny roa ka hatramin’ny valo hetsy no miakatra eo no ho eo ny karaman’ireo sefo mpiasam-panjakana dia mahalasa saina ny fangatahana ataon’ireto mpikambana. Samy te hiala amin’ny fahatrany marina ny tsirairay…
Ny fanontaniana mipetrak izao dia ny amin’ny fomba fiasan’ito rantsana vaovao ito. Marina fa manao vazaha mody miady ny ankamaroan’ireo mpanao politika ireo satria misy ohatra ny miara-misakafo any amin’ireo hotely be nefa eritreretina ho mpifandrafy mihitsy ary tsy vao ela fa tamin’ny alahady teo no niaraka nanao baolina kitra teo mahamasina ireo olona mba malazalaza amin’ny sehatra politika eto amin’ny firenena.
18 mars 2013 à 6:29
Malag@sy Miray | Ny fifamelan’ny samy malagasy